Home > Ngwaahịa > Enwu Enwu (Total 9 Ngwaahịa maka Enwu Enwu)
Enwu Enwu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Enwu Enwu manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Enwu Enwu na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Enwu Enwu na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Ike Energy Energy Mgbaàmà nke Oge Oge
Inye Ike: The high scale production line can fully guarantee the demand of customers.
Tag: Njikwa na-ekpo ọkụ nke ìhè ihu igwe , Mbara Igwe , Enwu enwu
Njiri nke ọkụ ọkụ dị na mbara igwe na- adabere na njikwa multi-phase multi-phase multi-plan controller, nke nwere ike ịkekọrịta 24 awa nke otu ụbọchị na oge dị iche iche na-agba ọsọ dị iche iche atụmatụ. A na-ekewa ụbọchị ọrụ na ụbọchị izu ike iji...
Anyanwụ na-eme ka okporo ụzọ na-enwu enyo
Tag: Red Blue Yellow , Ike Ike anyanwụ , Ihe ngosi mgbasa ozi okporo ụzọ
N'etiti ụdị dị iche iche nke mgbaàmà ịdọ aka ná ntị okporo ụzọ anyanwụ, ịdọ aka ná ntị ịdọ aka ná ntị, ịgba ọsọ, ụgbọala, ịṅa ntị n'ihe ize ndụ, ịgafe pedestrian na ụdị ndị ọzọ ejiri. Ihe ịrịba ama okporo ụzọ na usoro dị iche iche nke ike...
Enwu ọkụ na-acha ọkụ na-adịghị asọ oyi
Tag: Ikuku Nchekwa Na-enweghị Nchekwa , Gburugburu Ebe Ochie , Mfe Iji Wụnye
. Mmiri nke anyanwụ, LED n'èzí ìhè anyanwụ, ikuku mmiri na-enweghị ihe ọhụụ na-ekpuchi ọkụ, nke kwesịrị ekwesị maka ogige, mkpọchi, ubi, ubi, oghere, mgbidi mpụga, mmalite nke egwuregwu egwuregwu, ụda nrịgo-n'akuku 2. Nwuo ihu igwe na-eji...
Enwu Enwu akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Enwu Enwu ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Enwu Enwu kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Enwu Enwu wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.